के हो डिप्रेसन, लक्षण र उपचार बिधि ?? - ज्ञानविज्ञान
डिप्रेसन एक प्रकारको मानसिक रोग हो। यसले पीडित व्यक्तिको व्यवहारमा फरक ल्याउनुको साथसाथै शारीरिक तथा मानसिक पीडा पनि हुने हुन्छ । यसको कारणले पीडित व्यक्तिको दैनिक क्रियाकलाप, पढाइ तथा निर्णय लिनसक्ने क्षमतामा ह्रास आउने हुन्छ ।
डिप्रेसन भएको बेला मानिसलाई लाग्छ कि उसको जिन्दगी अब खत्तम भयो । यस्तो नकारात्मक सोचबाट बाहिर निस्किने उपायहरु के छन् त ?
जीवनलाई तनावबाट टाढा राख्नका लागि दिनको सुरुवात यसरी गर्न सकिन्छ :
बिहान सबेरै उठेर ढोका खुला गर्ने । त्यसले तपाईंको कोठा मात्र होइन, मन पनि उज्यालो बनाइदिन्छ । तपाईं बिहानको प्राकृतिक हावाको सम्पर्कमा पुग्नुभयो भने दिनभर आफूअनुकूल काम गर्न सक्नुहुन्छ । बिहानीपख प्राकृतिक हावाको सम्पर्कमा रहनु आवश्यक हुन्छ । यस्तो हावाले मेलाटोनिक र अड्रेनलिन उत्पादन गर्छ, जसले दिनभर फ्रेस बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
शारीरिक व्यायामले तपाईंको पूरै दिनलाई सुखद बनाउन भूमिका खेल्छ । प्रत्येक बिहान कम्तीमा ३० मिनेट शारीरिक व्यायाम गर्न जरुरी छ । यसले शरीरमा एन्डोर्फिन्स हर्मोन सक्रिय बनाउँछ, जसले दिनलाई सुखद बनाउनुका साथै अन्जानमा हुने गल्तीबाट पनि जोगाउँछ ।
३.आफ्नो लागि समय
बिहानको समय आफ्नो लागि पनि दिन जरुरी छ । व्यस्तताबाट १०–१५ मिनेटको समय छुट्याएर शान्तसँग आफूसँगै कुरा गर्नुपर्छ । यसले तपाईंको दिमागलाई शान्त राख्न र खुसी बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । यसका साथै गीत सुन्ने, म्यागाजिन, पत्रिका पढ्नेलगायतका काम गर्न पनि सकिन्छ ।
तपाईं बिहान जुन समयमा उठ्नुहुन्छ, त्यसभन्दा केही अगाडिको आलार्म लगाएर सुत्नुस् । त्यसो गर्दा तपाईंले सुत्नुपूर्व आफ्नो लागि केही सोच्न सक्नुहुन्छ । ढिलो उठ्ने, हतार गर्नुपर्नेजस्ता समस्याबाट पनि टाढा रहन सकिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त यस्तो गर्दा तपाईंले आफ्नै लागि समय पाउनुहुन्छ ।
त्यस्तै तनावमुक्त हुन् यी खाने कुरा खाएमा धेरै फाइदा हुन्छ ।
१.स्याउ: स्याउमा फस्फोरस र आइरन प्रशस्त मात्रामा पाएने हुदा तनाव उत्पन्न भएको बेला खुम्चिएका कोषिकालाई यसले पूर्वअवस्थामा ल्याउन मद्दत गर्छ, जसले गर्दा तनावको असर कम हुँदै जान्छ ।
२.अमला: अमलामा भिटामिन सी पाइन्छ। भिटामिन सीले तनाव उत्पन्न भएका कारण रगतमा आएको रासायनिक परिर्वतनलाई पूर्ववत अवस्थामा पु¥याउन मद्दत गर्छ ।
३.कुरिलो: तनाव उत्पन्न भएको बेला शरीरलाई शान्त र पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन भिटामिन बीको आवश्यकता पर्छ । जुन कुरिलोमा पाइन्छन् ।
४.ब्रोकाउली: ब्रोकाउलीमा फोलिक एसिड पाइन्छ, जसले तनाव कम गर्छ मद्दत गर्छ ।
५.दूध: दूधमा ट्राइप्टोफान नामक तत्व हुन्छ, जुन खाएपछि दिमागलाई फ्रेस र कुल बनाउने सेरोटोनिन नामक तत्वमा परिवर्तन हुन्छ ।
६.चिसो पानी: चिसो पानी पिएर खुला ठाउँमा डुल्न गयो भने रगतमा इन्डोर्फिन नामक तत्व उत्सर्जन हुन्छ, जसले दिमागलाई तनावमुक्त गराउँछ ।
७.केरा: केरा खानाले शरीरमा सेरोटोनिन नाम गरेको न्युरोट्रान्समिटर बढी उत्सर्जन हुन्छ, जसले तनाव कम गरी मानिसलाई शान्त राख्न मद्दत गर्छ ।
Don't Miss it बेसनको प्रयोग गर्नुका फाइदा, यस्ता छन्
Up Next यस्ता छन डिप्रेसनका लक्षण र उपचार बिधि